Qiso layableh oo Ku Dhacday Nin nayjeeri ah oo tahriib u Tagay Liibiya, | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Qiso layableh oo Ku Dhacday Nin nayjeeri ah oo tahriib u Tagay...
Qiso layableh oo Ku Dhacday Nin nayjeeri ah oo tahriib u Tagay Liibiya,
Evans William ayaa inoo sheegay inuu iibiyay wax walba balse uu ku guul darreystay riyadiisii ahayd inuu gaaro Yurub. Wuxuu iibiyay wax walba – sariirtiisa, faranjeerkiisa, telefishinkiisa, dharkiisa iyo teleofonkiisa gacanta. Kaddib markii uu lacag dheeraad ah deynsaday, wuxuu ugu dambeyn awooday inuu lacag siiyo mukhallasiin ka qaada Nayjeeriya oo marsiiya Saxaraha kaddibna geeya Libya.
Midowga Yurub ayaa rajeynaya in muhaajiriinta oo lagu caawiyo gudaha dalkooda, ay sababi karto in laga dhaadhiciyo inay ka tagaan Libya – halkaas oo ilaa 700,000 oo ku sugan loo maleynayo inay sugayaan inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan Yurub.
Qofna ma uusan dooneyn inuu wax la`aan soo laabto. Evans, tusaale ahaan, ma uusan dooneyn xitaa inuu dalkiisa ku laabto – inkastoo ay tahay halka keliya ee uu ka helayo sariir uu ku seexdo marka ay lacagta ka dhammaato.
Weli ma doonayo inaan joogo Nayjeeriya,” ayuu inoo sheegay. “marka xigta, waxaan isku dayi doonaa inaan Yurub si sharci ah ku tago.”
“Haddii ay hooyadey i aragto waxay la xanuunsan doontaa walbahaar,” ayuu yiri. “dhammaanna derisku, waxay leeyihiin, ‘Ninkan hooyadiis waxay iibisay dhulkeeda si uu u tago Yurub – balse wuu ku guul darreystay!’ haddii aan maqlo qof sidaa dhahaya, waxaan kuu sheegayaa inaan dili doono.”
“Hagaag, ugu horreyn waxaan doonayaa inaan lacagteyda dib u helo. Lacagta la i siiyay keliya waa qayb yaroo ka mid ah wixii igaga baxay Libya.”
Kuwee buu Abibu ka helay xirfadihii loo tababaray? Hagaajinta timaha? Beeralley? Wuxuu u muuqday inuu maanka ku hayay shaqo kale. “Waan eegi doonaa xirfadaha,” ayuu si cagojiid ah u yiri. “Balse waxaan ka walaacsanahay inaan dembiyo galo si aan lacagta dib ugu helo.”
“Dhac ama xatooyo, dabcan.”
Previous articleBaarlamanka Somaliland oo Laalay Moshonkii haamaha shidaalka Berbera
Next articleSacuudiga oo Si Rasmiya Xayiraadii Uga qaadaya Xoolaha Soomaalida